Kwamkelwe Abasebenzi Abatsha be-EPWP
You are here: Home / News / Kwamkelwe Abasebenzi Abatsha be-EPWP
I-EPWP programme yaqala ngonyaka ka 2004 isekwa ngulowo wayesakuba ngumongamelei weli utata uThabo Mbeki ngenjongo zokuncedisana nokulwa intswela ngqesho kunye nendlala kweli. Izithuba zomsebenzi ezi 1 million zaye zavulwa emva kokuqaluiswa kwale programme. Umceli mngeni we EPWP programme kukuncedisana nabantu abangenazo izakhono zokusebenza ukuze bafumane izakhono kunye nolwazi nendlela yokwenza umsebenzi, ijonga kakhulu imizi ekhokhelwe ngabantu abangomama, abakhubazekileyo, kunye nabantu abatsha ukuze bafumanane indlela yokuncedisa emakhayeni nokulwa indlala. Umvuzo owawunikezwa abasenzi be EPWP kuqala yayingeyo mali kodwa babethengelwa ukutya njengomvuzo ukuze bakwazi ukuphila emakhayeni wabo, nanjengoko izidingo zabantu zingafani kwaye kwatshintsha oko banikezwa imali kodwa ke basekhona abafumana ukutya njengomvuzo.
Ngomhla we 19 kuTshazimpunzi umaspala waseMzimvubu odityaniswa yidolophu yakwaBhaca kunye neyaseMaXesibeni udibanise bonke abasebenzi beEPWP kunye neHousehold contractor programme kwiholo yakwaBhaca ngenjongo yokubazisa nokubacacisela ngendlela elindelekileyo kwaye nevumelekileyo emsebenzini wabo. Isivumelwano sethutyana ukuya kunyaka siyenziwa sityikitywe phakathi komsebenzi kunye nomaspala esicacisa ngezinto ezivumelekileyo nezingavumelekanga, amaxesha kunye nentsuku zokungena emsebenzini ukuze umsebenzi akwazi okungavumelekanga. Siyaphela ke isivumelwano emva kwexeshana njengoko kuye kuphinde kunikezwe abanye abantu amathuba omsebenzi nawokufumana ulwazi ngezakhono zabo. Ikhona ikomiti echonga abantu abafumaniseka bedinga ukusebenza kwezi programme ekhethwa phambi kwe wadi khansela, komiti, Inkosi, amapolisa kunye nomntu ophuma kwindawo yabathathi nxaxheba.
Baye bacaciselwa nangendlela i-UIF kunye neCOIDA encedisana nabo ngayo. Izinto ekufanela ukuba bayazilandela xabedibana nengxaki emsebenzini ezifana nokwenzakala ngexesha lomsebenzi, ukungaphatheki kakuhle emsebenzini nendawo efanele ukuba baxela kuzo oku. Aba basebenzi baye baboniswa neqela elijongene nempilo kunye nokukhuseleka emsebenzini kulomaspala elinamalungu alishumi nantathu. Impahla ezikhuselekileyo zokusebenza ziyanikezwa kulamaqela kwaye kuyanyanzeleka ukuba ngawo onke amaxesha omsebenzi bahlale bezinxibile ukuze kungabikho kungavisisani xa kunokuthi kanti omnye wabasebenzi afumane ingozi nokwenzakala ngexesha lomsebenzi.​​​​​